Dhageys..Alshabaab Oo Sheegtay Qaraxii Ex-Koontarool ! | Xaqiiqonews
Dhageys..Alshabaab Oo Sheegtay Qaraxii Ex-Koontarool !
Ururka Alshabaab ayaa markii ugu horeysay ka hadashay qaraxii dhimashada badnaa ee Ex, iyagoo dadkii halkaasi ku dhintay ku tilmaamay Shuhado.
Afhayeenka rasmiga ah ee Alshabaab Shiikh Cali dhaare ayaa sheegay in qaraxii Ex uu ahaa qarax “qaldamay” isagoo sheegay in ay ka xun yihiin dadkii ku dhintay halkaasi.
Cali dheere ayaa sheegay in iyagu ka dambeeyeen qaraxii Ex, balse u jeedadu ay aheyd Ciidanka Turkiga hase ahaatee mashquul badan darteed uu ku qasbanaaday in uu naftii huraha halkaasi isku qarxiyo-sida uu hadalka u dhigay
Sirdoonka DF-ka NISA ayaa dhawaan shaacisay in dowlad shisheeye ay ku lug leedahay qaraxii Ekis, arintaasi oo Alshabaab ku qasabtay in ay hadlaan.
Waxaa jira su’aalo badan oo ka dhalan kara hadalka Alshabaab, sida maxay ula soo daaheen sheekashada,?Maxay sheekashadooda ugu soo aadiyeen hadalka NISA ka dib? sidee Alshabaab u xaal marin doonaan dhibanayaashii ex iyo kuwa kale badan.
Qaraxii Ex oo dhacay 28 diseembar 2019 ayaa ka mid ahaa qaraxyada ugu khasaaraha badnaa ee Magaalada Muqdisho ka dhaca, waxaana ku dhimatay in ka badan 100, halka ay ku dhaawcmeen dad ku dhaw 100.
Halkan hooseka dhageyso Codka Cali dheere